लघु-काव्य : कालो नाटक - साहित्य सङ्ग्रहालयसाहित्य सङ्ग्रहालय
← खण्ड-काव्य : ब्वाँसोको अन्त्यको खेल
खण्ड-काव्य : विद्रोहको छाल →
लघु-काव्य : कालो नाटक
Posted on April 15, 2014 by Sahitya - sangrahalaya
बितेर सदियौं जाँदा सम्मन उसले यहाँ
गरेन उन्नती आफ्नो सिवाय अरू निम्तिमा
उसैले अहिले फेरि दौडिने गफ गर्दछ
आधार आव को पर्ूर्ति गर्दछु किन भन्दछ –
पैले त माप को कुरा गर्दैथ्यो उसले यहाँ
परन्तु उसले फेर्‍यो किन त्यो पैलेका कुरा –
सपना देखेछ क्यारे प्रभुले मध्यरातमा
अन्यथा कसरी आयो नौरङ्गी महायोजना !
रातैमा फैलिए होला विकास सब ठाउँमा
त्यसैले निशिमै फुक्यो भावको महायोजना !
नेताले उसको सत्ता पल्टाउने कुरा ल्याउँदा
जन्ताले उनको साथ दिएर अघि गैदिँदा
नटिक्ने निश्चित भयो निरङ्कुश व्यवस्था यहाँ
त्यसैले जनता ठग्न दौडिने गफ गर्दछ ।
जन्ताले, विश्वले बोलेे विरुद्ध मापदण्डको
विकास कसरी हुन्छ सम्भवै हँुदैन भनी
प्रभुले विचार गरी मापको शर्ीष्ाक फेरे
आधार आवको पर्ूर्ति देखाऊ भनी मस्किए ।
यो सबै उसको चाल कुहेको रूप छोपने
निमोठी क्रान्तिको मुन्टो बिहानी पर छेकने ।
डढेलो फैलिंदा कालो सुविधा विनास हँुदै
इरानी शाहको जस्तो नहोस अवस्था भनी
ल्याएको योजना हो यो दानव बलियो हुने ।
चोरको सरदारले अनेक उपाय गरी
ल्याएको नीति हो देश, जनता लुटी भागने ।
केवल नाटकै हो यो कुहेको रूप ढाकने
सिंगारी नक्कली देह नौरङ्गी रूप देखिने
भुलाइ जनता आफू निर्दाेष साधु देखिने
संर्घष्ा, युगको आँधी धकेली पछि खेदने ।
धोकाको योजना हो यो भुलाई जनता सबै
बचाइ व्यवस्था अझै देशको रस चुसने ।
छल हो केवल धोका दुःखीको अभिशाप हो
विकास कसरी गथ्र्यो सोसने नयाँ रूप हो ।
ओढेर भेंडाको खोल आएको व्वाँसोको रूप
देखदा मन लोभिने विषको लड्डू मात्र हो ।
सडेको छ गलेको छ केवल बचने चाल
सक्दैन गर्न क्यै उसले सम्पर्ूण्ा झूट हो झूट ।
क्रान्तिको निमोठी मुनो योद्धाके गला रेटने
रोकेर प्रगति नौलो युगको रूप छेकने
आधारभुत् आवको पर्ूर्ति तगारो बनाइ ल्यायो
हातले र्सर्ूयलाई छेक्ने कुवुद्धि कसरी आयो !-
रेवीज रोगले सडि सकेको कुकुर फेरि
व्यूँतेर दौडिने भए चाहियो किन छाउरो –
विरामी घोडाले विश्व भ्रमण गरने भए
बुढोमा यौवन फर्की तेजले दौडिने भए
चाहियो किन पो पÝो बछेडो बेकारै यहाँ –
चाहिए किन ती जेट, रकेट र्व्यर्थमै यहाँ –
धोन्द्रो भै सकेको रुख चढेर पालुवा पुनः
फूल र फलले झम्म भैदिए जहिले पनि
रोप्दथ्यो विरुवा नयाँ कसैले दुःख झेलन –
ठण्डी र असिना, पानी सहेर विन सित्तिमा –
भाषण, गफले मात्र विकास फैलिने भए !
सिंहको महलबाटै विकास उम्रने भए !
पथ्र्यो र विश्वले र्व्यर्थ बगाई पसिना खून
सदियौं वर्षो लामो असारे दिन खेपन –
नेताजी उप|mेर पर्ूर्ति आधार आबको भए
भाषणको भरमा शिक्षा गाउँमा फैलिने भए
शिक्षित हुनेथ्यो देश उहिल्यौ नयाँ शिक्षामा !र्
पर्खनु किन पथ्र्यो र भावको महायोजना !-
फिस्टोले बाँसको टुप्पो नुगाइ नुगिने भए
बिरालो स्रि्राको माला लगाइ चोखिने भएर्
गर्दथ्यो रुसमा ठूलो उन्नती जारले पनि
झुण्डिनु किन पथ्र्यो र छोडेर सुख सम्पत्ति –
मागेको भीखले मात्र महल ठडिने भए
भिक्षाको भरमा साहू, मालिक भेटिने भए
पसिना बगाइ मील, खेतमा जोतिने किन –
लगाइ कपडा पीत जोगी भै नहिंडी सबै !
दिएको दानले मात्र मोटर गुडने भए !
पहाडहरूमा ठूला जहाज उ डने भए !
बेकार भैन के ठूला उद्योगहरू खोलन –
शान्तिले बसेको भू-मा अशान्ति सिर्जना गर्न –
नगरी उन्नती फाँट उर्वरा भैदिने भए !
उजाड भीरमा तेसै विकास उम्रिने भए !
जोतिनु किन पथ्र्यो र जलाइ खेतमा देह –
बगाइ मीलमा खून भिडनु किन पथ्र्यो र –
नभए गाईको गोठ नसके गर्न उन्नती
के खोज्नु दही र दूध मिष्ठान्न अनेकौं ं खान –
खोजेको ऋणमा भोज भतेर गराइ डटी
बजाइ क्यासेट घोडा चढेर ढल्किदै हिंडी
मागेको धनले छोराहरूको विवाह गरी
रमिते बनिनु भन्दा नगर्नु वेश हो बरु ।
सक्ने त विस्तारै हिंड्छ सक्दछ कठिन बाटो
समस्या, शत्रुका वीच नझुकी जीवनै भरि
हिंडनै नसक्ने रोगी दौडिन किन आँटनुु ! –
कामले देखिहाल्छ नि गफले किन हाँकनु ! –
बोल्दैन अगाडि वीर जितेर अरिका गण
कामले देखाइदिन्छ बोल्दैन पछि तै पनि
नामर्द कर्ुलन्छ पैले के के न गर्दछु भनी
विराट्को कुपुत्र लुकेझैँ लुक्दछ कोठामा पछि !
अवला नारीको वीच महान वीर बन्दछ
देखाइ पौरुष ठूलो गफैले अरि जित्दछ
परन्तु यथार्थ खुल्दा सपना सरि लाग्दछ !
प्रियाको समाती सारी नामर्द रुन थाल्दछ !
उस्तै हो यसको चाल जनताहरूको माझ
महान बनेर टिक्न खोज्दै छ सदियौं अझ
तै पनि भाग्नेछ छिट्टै, लुक्ने छ धोती भित्र गै
खुल्ने छ सत्यको ढोका विष्फोट हुने छ जब !
देशका पञ्च र चम्चा, भलाद्मी ! देश रक्षक !
निर्माण गर्दैछन् आफ्नै महल, धन सम्पत्ति
कतिले किन्दैछन् टापू कसैले किन्दैछन् महल
भागनु परेमा बस्न लुटेरा भागेझैँ पछि ।
आवास निमित्त यहाँ हँुदै छ तयारी ठूलो
बन्नेछन् महल राम्रा हुनेछन् बुकुरा धूलो
बस्ने छन् ठूला र ठालु चुसाहा, देश भक्षक
महान योजना पूरा गरियो देशमा भनी ।
लगाइ गज र आगो गरिबका घर-वस्तीमार्
गर्नेछन् खरानी झुप्रा गरिब सुकुम्बासीका
बन्नेछन् सहारा विहीन्, हुनेछन् विचल्ली सबै
बन्नेछन् शरणर्थी झैँ नेपाली देशभित्र नै ।
शहर सुन्दर होला लुटेको धन धान्यले
सडक विशाल होला भत्काइ घर सम्पत्ति ।
गुड्ने छन् विदेशी कार,उड्नेछन् जेट र विमान् !
डुब्नेछन् सुखमा पञ्च शताब्दी बीस सम्मन !
हुनेछ नुन र चिनी, पानीको प्रचार अझै
बन्नेछ दवाइभन्दा मदिरा, वियर धेरै !
हुनेछ प्रयोगशाला नेपाल विश्वमञ्चमा
विकास भएमा यस्तो अस्वस्थ रहला कोही ! –
बसेर कोठामा टिपी तथ्याङ्क देशको पूरा
तयार हुनेछ डाटा उन्नती कति भा े भनी !
कपडा, शिक्षा र खाद्य, आवास, सुरक्षा,स्वास्थ्य
प्रत्येक क्षेत्रमा वृद्धि हुनेछ कति हो कति !
विज्ञापन् पत्रमा छापी हरेक तथ्याङ्क, डाटा
देशको आधार आव छिनैमा वृद्धि भै जाला !
नथाकी चम्चा र पञ्च, नाइके, देश भक्षक
भट्टाइ रहलान् हाम्रो प्रतिज्ञा पूरा भो भनी
बक्ने छ रेडियो खाली यिनैको गीत गाउँदै
दिएर प्रभुको संंज्ञा नेपाल र्स्वर्ग भो भनी ।
प्रचार अति नै होला देश र देश बाहिर
फ्याकेर आँखामा छारो भुलाइ सबका सब ।
भन्नेछन् विदेशी सामु देखाइ झुट र फरेब
कसरी विकास गर्‍यौं हेर त हामीले भनी
तिमीले दिएको ऋण धनले यति भो अझै
दिएमा सहाय ठूलो गर्नेछौं देश उन्नती !
हुने छ बनको अन्त्य सुक्नेछन् झरना खोला
वषर्ाको कमीले होला उजाड बन पर्वत ।
चिनियाँहरूले थाम केराको खाएझैँ, यहाँ
पर्ने छ हामीले खान भोकको महामारीमा ।
मान्छेले मानिस खाने अवस्था सिर्जना होला
रहेमा प्र्रभुको राज शताब्दी बीस सम्मन ।
पर्नेछन् नेपाली भोकै, मर्ने छन् रोग व्याधिले
तै पनि मागेको भीख, चुसेको रगत, बोसो
हुनेछ भोजन डाँका, भ्रष्टका घर महलमा !
कुण्डले, मण्डले, मुन्द्रे, हुक्के र बैठके मिली
खानेछन् र्सवस्व लुटी देशको धन सम्पत्ति
शताब्दी बीस सम्मन व्यवस्था यही नै रहे
नेपाल डुब्नेछ सारा गुम्ने छ यस उन्नती ।
हुनेछन् नेपाली आफ्नै देशमा शरणार्थी झैँ
बन्नेछन् विदेशी मालिक् रहेमा स्थिति यो अझै
घुुम्नेछन् चिल र गिद्ध उजाड हिमशैलमा
फैलाई बाघले पञ्जा झम्टेला भेँडी गोठमा ।
आमाका गहना सारा बेच्ने छन् बीस सम्मन
राख्नेछन् धितोमा देश भुलेर इतिहास त्यो
हुलेर विदेशी वैरी सुम्पेर सब सम्पत्ति
बस्ने छन् विश्वासी पात्र बनेर, भुली जिन्दगी ।
वैरीले गरेको आफ्नी आमाको बलत्कारलाई
बस्नेछन् नदेखे जस्तो गरेर देश रक्षक !
चुसेर देशको स्वत्व गरेको लुट र हत्या
मौन भै स्वीकार गर्दै बस्नेछन् सुखहर्षे ।
खेल्नेछन् परेड यहाँ विदेशी सिपाइहरू
हुने छ बेहाल हाम्रो हुनेछौं कमार सरी !
देश यो पराधीन होला अस्तित्व नामेट होला
प्रदेशी टुहुरा जस्तो हुनेछौं देशमै हामी
सहेर हप्की र दप्की बाँच्ने छौं जिउँदै मरी
रहेमा व्यवस्था यही सदीको बीस सम्मन ।
विश्वले सदियौं लगाइ गरेको विकास पन्ध्रै
वर्षा गरने यस्को साहस कति हो कति ।
रहन्न अब यो लामो अवधि सम्म क्यै गरी
ढल्ने छ जसरी ढल्छ धमिरे रुख आँधीमा !
आशंका अनेक हुँदा आँधीको डरले गर्दा
फर्ेर्दै छ अनेक रूप खेल्दै छ अनेक खेल
तैपनि टिक्दैन यसको कुहेको सामन्ती राज
रुक्दैन क्रान्तिको धार विषालु लड्डूको भर
हट्दैन बन्दुक भर युगको नयाँ चाहना ।
फलाकी छेपारे कथा, भुलाइ जनता देश
बेश्याको छन्दमा खण्ड अठार सिर्जना गरी
डुवाइ नसामा मस्त सुताऊ र पनि यहाँ
उठ्ने छन् युग निर्माता समाइ कुटो बन्दुक ।
नाटक रच वा खेल उपाय जति नै गर
तै पनि मुक्तिको खेल रुक्दैन कहिल्यै पनि ।
दुष्ट हो देशका वैरी ! दानव, नर भक्षक !
नहोला सफल कालो नाटक यहाँ क्यै गरी
हर्ेर्दैन देश र जन्ता तिमीले खेलेको खेल
बस्दैन पशुको जस्तो जीवन विताइ सधै ।
च्यातेर मञ्चको पर्दा देखाइ सक्कली रूप
गर्नेछन् विध्वंस सारा ती त्रि्रा भ्रमजालको
नाटक रहेछ कस्तो मञ्चन गरियो किन –
बुझनेछन् सबैले कालो नाटक भित्रको रूप ।
खसाली सामन्ती ताज, चोरको सरदारलाई
दिनेछन् उचित दण्ड जारला दिएझैं गरी ।
भत्काइ सम्पर्ूण्ा व्यूह वर्गीय दुश्मन, वैरी
गर्नेछन् विनष्ट, ज्यामी, किसानहरू एक भै ।
निशाको साम्राज्य अन्त्य भएर बिहान होला
हँसाइ दिगन्त सारा रक्तिम रवि जन्मला
यसरी सुनौला युग जन्मेला हिमदेशमा
आधार आवको पर्ूर्ति हुनेछ त्यसै युगमा ।
(स्रोत : Bishnu Bhandari’s Blog)
This entry was posted in लघु-काव्य and tagged S B Biwek. Bookmark the permalink.